Sida loo yareeyo shaashadda si loogu isticmaalo taleefanka hal gacan oo ah MIUI | Androidsis
Sida loo yareeyo shaashadda si loogu isticmaalo taleefanka hal gacan oo ah MIUI
Waxaa jira shirkado dhowr ah oo bixiya suurtagalnimada isticmaalka taleefanka gacanta hal gacan, isla sidaas waxaa badanaa sameeya soo saaraha Xiaomi oo leh MIUI, sidoo kale Redmi. Tan awgeeda, hoos u dhigida gudida ayaa loo isticmaalaa, iyadoo boos yar la helayo waxay noqon doontaa mid aad u macquul ah inaad u isticmaasho sidii inaad labada gacmoodba u isticmaaleysay ebuteelka.
Farqiga u dhexeeya noocyada kale ayaa ah in lakabka MIUI uu noo oggolaan doono inaan dooranno halbeegga aan dooneyno inaan adeegsanno, tusaale ahaan waxaad dooran kartaa illaa 3,5 inji, 4 ama midka adiga kula wanaagsan. Hoos u dhig shaashadda si aad ugu isticmaasho telefoonka MIUI waa hawsha in yar laga ogaado waxa ku saabsan xulashooyinka gudaha.
Marka aad yareyso shaashadda taleefanka waxay ku tusi doontaa wax kasta oo ka yar, laakiin waad awoodi doontaa inaad wax walba u maamusho sidii aad horayba u sameysay. Howsha ayaa ah in hal gacan aad ku furan karto codsiyada, ku qori karto ama ku sameyn karto mid kale howlaha badan ee taleefankaaga casriga ah.
MIUI marka loo eego asal ahaan waxay la socotaa dhowr tallaabo, waxay ku xirnaan doontaa midka aad doorato si aad ugu fiicnaato hal gacan. Markaad codsato isbeddelada waxaad dib u soo celin kartaa mar kale adiga oo barkinta xulashada gudahood dejinta, sidaas darteed waa wax aad isticmaali karto waqti cayiman.
Si loo yareeyo shaashadda si aad ugu isticmaasho taleefanka hal gacan waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Soo gal Dejinta qalabka Xiaomi / Redmi
Markaad gudaha gasho Settings Dheeraad ah si aad u gasho menu aad muhiim u ah, halkan waxaad ku sameyn kartaa waxyaabo badan marka laga reebo yareynta shaashadda
Guji hal-gacan qaab si aad ugu hagaajiso shaashadda qaabka inji ee aad rabto, dooro mid ka mid ah xulashooyinka kala duwan, maadaama aad leedahay dhowr inji
Waad ku dhaqaajin kartaa toobiye qaabkaan ay horeba u isticmaaleen dad badan oo isticmaala MIUI
Habka hal gacan ee MIUI ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu dhameystiran iyo in badan oo soosaarayaasha ah waa in loo dejiyaa inay tan ku waafajiyaan qaabeynta aasaasiga ah ee la bixiyo. Qaabkan waa la jari karaa marka aad rabto adoo galaya marinna ka dhigaya, markaa mar labaad ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashad buuxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Sida loo yareeyo shaashadda si loogu isticmaalo taleefanka hal gacan oo ah MIUI
Haddii aad seegtay qoriga 'S Pen' ee ku yaal qoraalo duleedkii hore ahaa, kani waa kan ku yaal Galaxy S21 Ultra
Weli ma garanaysid waxa lagu siinayo Reyes? Qalabka elektarooniga ah waligaa waad saxnaan doontaa